Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Soomaaliya Oo Xukunno Kala Duwan Ku Ridday 2 Askari – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Soomaaliya Oo Xukunno Kala Duwan Ku Ridday 2 Askari
STN News January 14, 2019 Leave a comment
Sedax Alifle Booliis. Cali Mahdi Maxamed iyo Tahliil Cali Maxamed ayaa loo xiray dilka Marxuum Ex Kormeera Sedaxaad Booliis. Xasan Aadan Ibraahim, dilkaasi oo ka dhacay gudaha Saldhigga degmada Hilwaa ee gobalka Banaadir 13-10-aaad sandkii tegay.
Sedax Alifle Boliis. Cali Mahdi Maxamed ayaa loo heystaa in qoreygiisa uu kaga tagay meel cidla ah halka Tahliil oo loo diyaarinayay ciidanimo uu riday xabado sababay dhimashada Marxuum Ex Kormeera Sedaxaad Boliis. Xasan Aadan Ibraahim.
Ciidamada amniga degmada ayaa isla xilligaasi ku wareejiyay labada eedeysane Hey’adda baarista Dambiyada CID.
Kadib markii ay ka guteen waajibaadkooda baarista ayay u soo wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Side, waxa ayna xafiiska weydiisteen Garsoorka Maxkamadda Ciidamada in loo gudbiyo xabsiga dhexe eedeysanayaasha gar-sugo ahaan 22-ka 10-aad sanadii 2018.
Baaritaan kale oo dheerad ayay sameeyeen xafiiska xeer ilaalinta, waxa ayna weydiisteen garsoorka in la muddeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah labada eedeysane.
Maxkamadda Darajada koowaad ciidamada Qalabka Side ayaa muddeysay dhageysiga dacwadda 15-12 ee 2018, waxaana lagu ballamay laba cisha kadib fadhiga hore ee Maxkamadda.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa maxkamadda horkeenay laba markaati, baaraha dacwadda oo si wada jir ah loo weydiiyay dhammaan su’aalo ku saabsan dilka, sawirka marxuumka iyo warqadda dhakhtarka ee muujinta dhimashada.
Laba xidigle Ismaaciil Salaad Maxamed oo ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha ayaa ku dooday in Tahliil Cali Maxamed uu yahay qaan-gaar miir qaba sidaas darteed loo ciqaabo dambiga halka Sedax Alifle Boliisk Cali Mahdi Maxamed uu dayacay qoreygiisa loogu tala galay in uu ku difaaco cadowga.
Sedax Alifle Boliiska Cali Mahdi Maxamed ayaa fadhiga Maxkamadda ka sheegay in uusan ku tala galin dayac balse qadarta ay ku dhacday in Tahliil Cali Maxamed oo aan aqoon badan u laheyn qoreyga sabab u noqday geerida Marxuum Xasan Aadan Ibraahim.
Qareenada u dooday laba eedeysane ayaa xilligaas ku dooday in wax walba ay ku dhaceen aqoon darro sidaas darteed lagu xukumo diya gaf ah.
Maxkamadda Darajada koowaad ayaa horay ugu soo kala xukuntay in Tahliil Cali Maxamed uu bixiyo Diyo boqol halaad ah oo ah magta Ex Kormeera Sedaxaad Boliis Xasan Aadan Ibraahim iyo laba sano oo xarig ah halka Sedax Alifle Boliisk Cali Mahdi Maxamed lagu xukumay laba sano oo xarig ah.
Xukunsayaasha ayaa ku qanci waayay xukunka waxa ayna rafcaan u qaateen Maxkamadda Sare 31-12-2018.
Markale ayaa dib loo furay galka labada eedeysane iyadoo la marinayo marinka cadaaladda, waxaana markale loo ballamay fadhiga Maxkamadda 8-bishan aynu ku jirno, waxaana shan cisha kadib lagu ballamay fadhiga Maxkamadeynta Sedax Alifle Boliisk Cali Mahdi Maxamed iyo Tahliil Cali Maxamed.
Doodda u dhexeeysay dhinacyada dacwadda ayaa si isku mid ah fursada loo siiyay.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa si lamid ah soo bandhiga dhammaan qodobada eeddooda, waxaana sidoo kale Qareenada laba eedeysane ku doodeen in loo naxariisto.
Ugu dambeyn Maxkamadda Sare ayaa ku kala xukuntay
Tahliil Cali Maxamed diyo 100-halaad ah oo ah magta Marxuum Kormeer Sedaxaad Boliis Xasan Aadan Ibraahim iyo laba sano oo xabsi ciidan ah.
Sedax Alifle Boliisk Cali Mahdi Maxamed ayaa isna lagu xukumay Sedax sano oo xabsi Ciidan ah.
Maxkamadda Sare ayaa ah halka ugu dambeyso oo uu ula Laabto xukunsanaha hadii uusan ku qancin Xukunka Maxkamadda Darajada Koowaad.
← Barasaabka Kisumu oo daryeel caafimaad loogu soo qaaday Nairobi
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta kulan ka yeelanaya wax ka badalka xeerka Bangiga Dhexe →